FAQs - Dongguan Zhantuo Optical neLens Co., Ltd
hud the gogorosi
GPS Navigator Car hud the neLens
Headsets AR Augmented Realit Ngowani neLens
Tichifungisisa bemhapemha Lenses
Photoelectric neLens Series
Idenderedzwa & Aspherical lenses
Stage Lights neLens
Sports magogorosi dzino
Safety Ngowani neLens
Ski magogorosi neLens
Akatasva Windproof Lenses
Swimming magogorosi Lenses
Safety & Protection magogorosi dzino
Military magogorosi Glasses
Inobudisa Glasses lenses
Kwakajeka Glasses lenses
Njenjemera Products Series
Acrylic hotera rinopiwa
Acrylic kuratidzwa mon
Mould Design & Kuita
Optical Mirror makorari
Optical neLens Mould
Profiled pamusoro makorari
Ndezvipi zvinhu iwe kubereka?
Our chikuru Manyiminya zvigadzirwa muri ose idenderedzwa uye asiri idenderedzwa izvo, VR 3D izvo, akatungamirira izvo, läpinäkyvä acrylic zvigadzirwa ( unyanzvi mabasa, mhuri uye hotera supplies, Stationery, nyaya mashandisiro ose, etc. ) , hud the fungidziro izvo, kuchengeteka ngowani visors, mitambo izvo (Ski magogorosi neLens, Swimming izvo, Bicycle Mujaho izvo), Sunglasses izvo, Industrial unodzivirira izvo, Various anokosha serin'i curved pamusoro lenses, purasitiki chigadzirwa, uye MAUMBIRWO.
Ungakwanisa zvinopa OEM kugadzirwa?
Hungu, tinogona. Tinogona kuita Mould kugadzira, kugadzirwa uye kubudiswa revatema mabasa maererano vatengi 'vanodhirowa kana ivhu.
Ungave inogona rakagadzirirwa kwatiri?
Chokwadi, kana iwe akatipa pfungwa dzako uye anoenderana parameters, isu acharonga uye magwaro kuvandira magadzirirwo yekusimbisa kwenyu zvakakwana. Pamberi hurongwa isu ucharaira zvakagadzirwa kubhadhara, asi panguva vakawanda kugadzira, tichadzoka yenyu patani mutengo.
Izvo ndege tinogona kushandisa pamusoro kugadzirwa?
Simbisa: Kuti kudzivisa chigadzirwa kubva muvare, vanopfeka, uye kuvenga zvazvinoita
Värjäys: Wedzerai ruvara iri mbishi zvinhu, kugadzira chigadzirwa namavara akasiyana
Electroplating: pave gradient mavara, Water sirivha mavara, siyana mavara , Pattern yakanamirwa pamifananidzo, etc nokuti akanaka pamusoro maturo.
Bemhapemha: Kushandisa Manyiminya dzakaonda firimu uye Vacuum michina, ari chigadzirwa pamusoro ra zvevanopesana UV firimu, AR firimu, kuvengwa fingapurindi firimu, etc.
Zvakadini mharidzo mutariri uye pakusununguka?
Mharidzo nokuchengeta maererano chaiyo chigadzirwa, kana zviri guru kugadzira, tinogona kudzokera mharidzo shanduro kubhadhara mune Mari chigadzirwa.
Pashure iyewo wakapa mharidzo shanduro kubhadhara, yeGmail.END_STRONG anotumira nesu zvinosimbisa faira / email, maererano kunzwisisa chigadzirwa, isu vanoongorora nguva experimental anofa uye proofing nguva. Mharidzo Shanduro kukurukura 5 kusvika 10 mazuva nevakawanda. Kana uchida uwandu yokuenzanisira kuzosimbisa quality, tinogona kupa iwe mharidzo for free, unongofanira kuva kubhadhara chokufambisa mari.
Kutumira mimwe nokuda TNT , Ups , FedEX , dhl Express.
Une akuumbe vose vakaratidza zvigadzirwa?
Mifananidzo website anobudiswa neZvapupu fekitari, Only sechibayiro reference, kana uchida kuziva zvakawanda tapota kubvunza mushambadzi yedu.
Rinhiko ndiyo Foroma zvibereko nguva?
Maererano kukura uye kunzwisisa kwakaita chigadzirwa kusarudza chimwe akagadzirwa nguva muforoma hwomukova kupera nguva, maererano zvinodiwa murayiro uye vatengi rokuongorora Foroma mhango nhamba uye kutevedzera chakuvhuvhu nhamba. Mushure Pakusarudza mharidzo kana kudhirowa, General muforoma kugadzira kunoita kwemazuva 20-30.
The Odha uwandu ndiyo 3K, Nesuwo kugamuchira diki kwazvo kunzwisisa mirairo, asi mutengo achava kwirirei. Kana mirairo vari hombe, tinogona kuwana zvakanaka yakatsvuka zvinhu mitengo uye kuderedza utariri mari, saka tinogona kupa isingadhuri mutengo.
Rinhiko kudzikinurwa nguva?
Maererano chakuvhuvhu nguva, kuti zvakawanda uye urongwa kurongeka, mukuru tichadaro Delivery zvigadzirwa mukati memazuva 20 pashure pakuita mold.Delivery zvigadzirwa. Nhoroondo yedu yakanaka iri 50000 mukati 1day kuti VR izvo
Ndeipi yako Delivery nzira?
Chii certifications yenyu?
ISO9001, SGS yokuedzwa mushumo uye zvakawanda, izvo nechokwadi ose zvigadzirwa kugadzirwa mberi zvakanaka.
Tiri nhengo Alibaba Trade Assurance iri basa idzva yakapiwa Alibaba, kudzivirira mutengi kuti mubhadharo kune bhizimisi kuitira bhizimisi mitoro yavo panyaya kuitira pakukurukura uye chigadzirwa unhu. Unogona kuripa ne muripo pamusoro alibaba, kana kushandisa paypal. zvinhu Large isu nawo T / T 30% dhipoziti akabhadhara, pachiyero akabhadhara pamusoro kopi p.
tinogona kushandisa kwedu kutumirwa mumiririri?
Hongu unokwanisa. Takanga pamwe forwarders zhinji. Kana uchida, tinogona kukuudza mamwe forwarders kwauri uye iwe unogona enzanisa mutengo uye mabasa.
Chiteshi Yedu zvacho?
Kana Ndinoda kushanyira fekitari wako, Ndeipi padyo yendege kana mumhuri Airport?
Shenzhen Bao'an International Airport ndiye pedyo yendege, Guangzhou- Baiyun International Airport chinguva kure. Tapota tiudze vasati vashanyira kwenyu, isu acharonga mutyairi kuti anotora iwe kumusoro.
About Order Procedure
1, Inquiry-Professional kotesheni
2, Zadzisai mutengo, kutungamirira nguva, mifananidzo, mubhadharo izwi etc.
3, Sales ndinotuma Proforma inivhoyisi pamwe chisimbiso.
4, mutengi kuti muripo mubhangi kana mharidzo kubhadhara uye titumirei Bank chionekeso.
5, Initial Production Stage-Udzai vatengi kuti tine muripo, uye achaita kuti mharidzo maererano kwenyu chikumbiro, kukutumirai mapikicha kana Zvandakashanda kuti unovafarira. Mushure tendero, Tinokuzivisaiwo kuti isu acharonga kurimwa & kuudza vanofungidzirwa nguva.
6, Middle kugadzirwa-kutumira mapikicha anoratidza dzaFord paunogona kuona zvinhu zvenyu. Zadzisai kwacho nguva pakukurukura zvakare.
7, End Production-Misa kugadzirwa zvigadzirwa mapikicha uye ivhu ndichatuma kwauri tendero unogona kuronga bato rechitatu Inspection.
8, Clients kuti abhadhare mwero uye isu kuronga kutumirwa nhumbi.
9, Order inogona kutaura "kumugumo" kana ukagamuchira zvinhu uye kugutsa navo.
Feedback kwatiri pamusoro Quality, Service, Market Feedback & Suggestion. Uye tinogona kuita nani.
tiri gadzira. Tine kwakakwana muforoma uye otomatiki zvibereko midziyo, izvozvo zvinoita tinokwanisa kuita kugadzirwa purogiramu kasira kukurukura.
-Gore 10 Experience
tine pamusoro ruzivo-gore 10 indasitiri ino. Izvi zvinoreva kuti tinogona vaone zvinetso mirairo uye kugadzirwa. Saka, zvichaita nechokwadi kuti kuona ngozi ezvinhu zvakaipa zviitike.
Kunongedzera kunongedzera Service
pane mumwe rokutengesa anomirira ndiani kukushandirai kubva wobvunzisisa inogadzirwa nengarava kubva. Panguva iyi, unongofanira kuva kukurukura naye dzose matambudziko uye nzira anoponesa nguva yakawanda.
nerimwe kuti, yakaoma rokuongorora chichaitwa neDare QC dhipatimendi vasati kutumirwa. Unhu zvakaipa uye mamiriro ezvinhu kana kudziviswa mukati musuo.